काठमाडौं महानगरको स्वरूप यसरी बदलिन्छ | काठमाडौँ महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वाग्मती प्रदेश
श्री सबै वडा कार्यालय, स्वयम् सेविकाकाे भत्ता सम्बन्धमा
IEMIS भर्ने / अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । श्री कक्षा ११ र १२ तथा (O+2) सञ्चालित सबै विद्यालय/ कलेजहरु , का.म.पा ।
कार्यवाहक प्रमुख भई कामकाज गर्ने सम्बन्धमा ।
वडास्तरीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालय, का.म.पा ।
विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन । श्री १ देखि ३२ वडा कार्यालय, का.म.पा ।
काठमाडौं महानगरपालिका, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।
काठमाडौं प्रवेश गर्ने अनुमति दिने सम्बन्धमा । श्री सबै वडा कार्यालयहरु, का.म.पा ।
प्रशासनिक कार्यसञ्चालन व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा । श्री सबै विभाग/ आयोजना/ सचिवालय / वडा कार्यालयहरु, का.म.पा ।
Home » काठमाडौं महानगरको स्वरूप यसरी बदलिन्छ
काठमाडौं महानगरको स्वरूप यसरी बदलिन्छ
काठमाडौं महानगरपालिकाले देशको राजधानीको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, हाम्रो राजधानी अन्य देशको जस्तो विकसित छैन । सडक सञ्जाललाई जीवन जोड्ने नसा मानिन्छ । तर, महानगरको सडक सञ्जाल अत्यन्त कमजोर छ । फराकिला केही सडक छन्, तर ती अत्यन्त न्यून छन् । अव्यवस्थित, सााघुरा र जीर्ण सडकले राजधानीको जीवन जसोतसो धानिरहेका छन् । राजधानीको वैभव झल्काउने कुनै एउटा भौतिक संरचना पनि बन्न सकेको छैन, यहाा । आधुनिक सहरीकरणको जगसम्म हाल्न सकिएको छैन । लामा–लामा फ्लाइओभर, मेट्रो ट्रेन, गगनचुम्बी संरचनाविहीन नाम मात्रको राजधानी बोकेर बसेको छ, हाम्रो महानगर । अझ १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले ऐतिहासिक विरासत बोकेका सम्पदा ध्वस्त पारिदिएपछि त महानगर झन् दुरुह बनेको छ । तर, धूलो टकटक्याएर उठ्ने प्रयास गर्दै गरेको महानगरले केही यस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, जुन पूरा भए पनि गर्वले भन्न सकिनेछ, यो हो हाम्रो सभ्य र सम्पन्न महानगर ।
स्वदेशी तथा विदेशी निकायको सहयोगमा कतिपय योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनका क्रममा छन् । महनगरका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले नयाँ पत्रिकाका टेकराज थामीलाई १० महत्वाकांक्षी योजना सुनाए :
महत्त्वाकांक्षी १० योजना
१. ठूला बस र मेट्रो रेल
साँघुरा सडक विस्थापित हुनेछन् । ८० सिटेभन्दा ठूला बसलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । यसको सुरुवात साझा यातायातसँगको सहकार्यबाट भइसकेको छ । साझालाई २५ वटा बस किनिदिने सम्झौता भएको छ । यसका लागि महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
पाँच वर्षपछि राजधानीमा विद्युतीय बस चल्नेछन् । मुलुकभित्रै उत्पादन भएको विद्युत्बाट बस सञ्चालनमा ल्याइनेछ । राजधानीमा मेट्रो रेल र मनो रेल पनि गुडाउने योजना छ । अबका केही वर्षभित्रै राजधानीमा मेट्रो या मनो रेलमध्ये एक गुडाउने महानगरपालिकाको योजना छ ।
२. भूमिगत तथा बहुतले पार्किङ
यसको कार्यान्वयन खुलामञ्चबाट हुँदै छ । यसको ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ सकिइसकेको छ । रिपोर्टअनुसार दुईतले अन्डरग्राउन्ड पार्क निर्माण हुनेछ । पार्किङमा एकपटकमा चार हजारभन्दा धेरै सवारीसाधन रहन सक्नेछन् । माथिल्लो भागमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मञ्च बनाइनेछ ।
यही मोडेलको पार्किङ लैनचौरस्थित खुला चौरमा पनि निर्माण गरिनेछ । ठमेल क्षेत्रलाई लक्षित गरी निर्माण गरिने पार्कको सबै भाग अन्डरग्राउन्ड हुनेछ । पार्कको माथिल्लो भागमा भने खेलमैदान निर्माण हुनेछ । न्युरोडको धर्मपथस्थित खुला क्षेत्रमा भने बहुतले पार्किङ निर्माण गरिनेछ । १४ तलासम्म निर्माण गरिने पार्किङमा न्युरोड क्षेत्रका सवारीसाधन पार्किङ गरिनेछन् ।
३. सहरी पुनर्विकास
सहरी पुनर्विकासअन्तर्गत पहिलो चरणमा हाउस पुलिङ गरिनेछ । पुराना संरचना हटाइनेछ । जग्गा खाली गरिनेछ । खाली जग्गामा आधारभूत प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । जग्गाको प्रकृतिअनुसार पुरातात्त्विक तथा मौलिक संरचनामा घरको नक्सांकन गरिनेछ ।
निर्माणको सबै खर्च घरधनीले नै व्यहोर्नेछ । नक्सांकन, ढल, पानी, बाटो, सञ्चार, विद्युत्लगायतका भौतिक संरचना भने महानगरपालिकाले नै निर्माण गर्नेछ । निर्मित घर पाँचतले मात्रै हुनेछन् । दुई तलामा सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरिनेछ । बाँकी तीन तला भने आवासका लागि प्रयोग हुनेछ ।
४. काठमाडौं भ्यु टावर
अबको पाँच वर्षभित्र पुरानो बसपार्कमा २१ तले काठमाडौं ‘भ्यु टावर’ निर्माण हुनेछ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट भ्यु टावर निर्माणको शिलान्याससमेत भइसकेको छ । टावरको माथिल्ला तलामा बैंक, सपिङ कम्प्लेक्स, सोरुम, सिनेमा हल, डिस्को, रेस्टुरेन्ट, जिम हल, स्विमिङ पुलदेखि फाइभ स्टार होटेलसमेत निर्माण गरिनेछ । दक्षिण एसियाकै नमुना बनाइने टावरभित्रका सम्पूर्ण सुविधा चौबीसै घन्टा खुला हुनेछन् ।
५. आकर्षक नयाँ बसपार्क
पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी)अन्तर्गत नयाँ बसपार्कमा अत्याधुनिक बसपार्क बन्नेछ । यसका लागि महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग सम्झौता गरिसकेको छ । बसपार्क निर्माणमा ल्होत्सेले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । योजनाअनुसार बसपार्कस्थित कान्तिपुर मलसँगै अत्याधुनिक क्लकटावर बन्नेछ । त्यसको सामुन्ने साना सवारीसाधनका प्रतीक्षालय बन्नेछन् । अत्याधुनिक टिकट काउन्टर बन्नेछ । टिकट काउन्टरनजिकै बस छुट्ने समय हेर्न मिल्ने अत्याधुनिक ‘स्क्रिन’ जडान गरिनेछ ।
६. झलमल्ल काठमाडौं
महानगरपालिकाभित्रका सडकमा सोलारबत्ती विस्तार गरिनेछ । यस कार्यका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकिएको छ । महानगरपालिकाभित्रका प्रत्येक घरमा सोलार जडान गरिनेछ । प्रत्येक घरमा ‘मिनी ग्रिड’ जडान गरिनेछ । त्यसले खपत हुन नसकेको विद्युत् जम्मा गर्नेछ । उक्त विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सीधै जोडिनेछ ।
७ . वेस्ट टु इनर्जी
महानगरपालिकाभित्र दैनिक तीनदेखि चार सय मेट्रिकटन फोहोर उत्पादन हुन्छ । विद्युत् उत्पादनको स्रोत यही हो । ‘पाइलट प्रोजेक्ट’अन्तर्गत अबको ६ महिनाभित्र महानगरभित्र तीन सय टन तौलबराबरको अत्याधुनिक मेसिन जडान गरिनेछ । मेसिनमा संकलित फोहोर प्रोसेसिङ हुनेछ । यसक्रममा एकातर्फ विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने अर्कोतर्फ मल उत्पादन हुनेछ ।
८. सम्पदा पुनर्निर्माण
महाभूकम्पबाट ध्वस्त महानगरपालिकाभित्रका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । यस कार्यमा महानगरपालिकाले पुरातत्त्व विभागको सहयोग लिनेछ । पुरातत्त्व विभागले सम्पदाको भित्री संरचना निर्माण गर्नेछ । महानगरपालिकाले सम्पदाको बाहिरी आवरण निर्माण गर्नेछ ।
९. बागदरबारको पुनर्निर्माण
संघीय संरचनापछि प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा अब बन्ने बागदरबारलाई निर्माण गरिनेछ । नवनिर्मित बागदरबारमा टेलिभिजन र रेडियो स्टेसन हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम हल, सिनेमा हल, थिएटर हल बनाइनेछ । यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
१०. एकीकृत रत्नपार्क
शान्तिवाटिका र रत्नपार्कबीचको सडक हटाइनेछ । उक्त सडक सैनिक मञ्च र खुलामञ्चको बीचमा सारिनेछ । नजिकै रहेको महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको भवन पनि हटाइनेछ । खाली स्थानमा बास्केटबल कोर्ट निर्माण गरिनेछ । छेउछेउमा दर्शक बस्न मिल्ने प्याराफिट निर्माण गरिनेछ ।
रानीपोखरीको आधुनिक किसिमले पुनर्निर्माण गरिनेछ । पुनर्निर्माणमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ । पोखरीको मध्य तथा चार दिशामा विद्युत्बाट सञ्चालित ‘म्युजिकल फाउन्टेन’ जडान गरिनेछ ।
महानगरले सहरी विकासका धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गरिरहँदा महानगर भएर बग्ने नदी संरक्षणतर्फ भने ध्यान दिएको छैन । अढाइ दशक अघिसम्म कलकलाउँदो र निर्मल बागमती, विष्णुमती काठमाडौंवासीको पहिचान थियो । बाजे पुस्ता र बूढापाकाको स्मृतिमा मात्र सीमित बाग्मतीको यो कायामा व्यापक नकारात्मक परिवर्तन आइसकेको छ । अढाइ दशकअघिका सम्झना र तस्बिरहरू पूरै धुमिल भइसकेका छन्, स्मृतिबाट बाहिर निस्कने हो भने बागमती, विष्णुमती कुरूप भइसकेका छन् ।
कुनै समय नदीका तिरमा राखिएका फलामे सिक्रीका सहायताले नदीमा छिर्नुपर्ने अवस्था परिवर्तन भएर आज नदी मृतप्राय: बनिसकेको छ । यो मृत नदीसँगै काठमाडौंको एउटा सग्लो पहिचान पनि गुम्ने खतरा छ । स्वरूप बदल्न भन्दै ठूलठूला योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा लागेको महानगरपालिकाले यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन ।
- See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/12/40727#sthash.CIel04O4.DwweCY80.dpuf